Soloy PDS @ izay ny Ben'ny tanÃ na Andry TGV | news2dago |
Soloy PDS @ Izay Ny Ben'ny TanÃ Na Andry TGV
news2dago 03 Febroary, 2009 08:23 Ankapobeny Rohy maharitra Verindrohy (trackback) (0)
Efa nanala tena tsy ho ben'ny tanàna intsony ny tenany (andry TGV) t@ nandraisany an-dalambe ny fahefana sy ny fibaikona ny "firenena" koa dia malalaka izany ny ao @ CUA fa tsy misy mpitantana intsony ka rariny loatra raha manendry PDS @ izay ny fanjakana mahefa ankehitriny. Miavosa ny fako ny làlana simba sy feno lavaka ny zaridaina tsy misy mikarakara fa laozana mandany andro etsy @ 13mai fotsiny.
Nampetraka omaly teny @ fitsaranaavo kosa ilay taratasy mampiato ny filoha ny repoblika @ asany voalaza moa fa nanitsakitsaka ny lalam-panorenana ny filoha amperinasa ankehitriny.
Ny mpiara miasa akaiky @ ben'ny tanana moa no nanatitra izany omaly hariva t@ 6 ora hariva. Dia i Ny hasina Andriamanjato sy Nadine Ramaroson izany.
Ho eny Tsimbazaza kosa ry zareo androany hametraka ilay taratasy ihany koa ho eo @ ireo solombavam-bahoaka sy ny loholona. izao moa no natao mba hanana saritsarina demokrasia ilay fandrombahana fahefana natao ny asabotsy lasa teo.
Miditra mianatra androany kosa ireo mpianatra eny @ sekoly katolika. Ny any @ faritra hafa moa dia milamina avokoa ary efa nandray ny asa aman-draharaha avokoa ny mpiasa mpanjakana rehetra omaly. Tsy nisy nanaraka izay baiko tetsy an-dalambe moa arak'izany ireo mpiasa. Mitaraina kosa ny mpitarika ny tolona eo @ mpiasam-panjakana fa voasakan-tsakana hono ry zareo. Kanefa ny mpiasa mihitsy no tsy te hamonjy ny tolona. Mazava ho azy fa tsy misy olona firy intsony mamonjy ny kianja ny 13 mai.
Inona indray ary no ho lazaina eny @ 13 mai androany efa leo mihitsy ny olona @ ity tolona tsy hita soritra mazava izay tena tanjona tiana hatongavana ity. Heno indray izao fa mikasa ny hitondra vahoaka ho eny Iavoloha indray. Dia efa tena mirediredy mihitsy. Olona 1.000 ve no lazainao hisolontena ny vahoaka 20 tapitrisa. Mila mianatra manisa tsara mihitsy aloha vao mitarika vahoaka fa tsy mety intsony izao atao izao. Efa manomboka miatraika @ vahoaka indrindra ny eto andrenivohitra koa ankehitriny ny fidangan'ny vidim-piainana.
Akon'ny 13 mai kosa dia niangavy ny vahoaka ny ben'ny tanana fa aato kely aloa ny 13mai fa @ asabotsy indray mihaona no sady hampiseho ny governemanta an-dalambe no hampiseho ireo miaramila mpioko. Ho any Diego kosa hono izy rahampitso raha ny filazany fa ny vaovao miely kosa anefa dia ny oe hikarakara ny fandosirana ny tenany ankehitriny. Mihena be mihitsy mantsy ireo olona tonga teny @ 13 nanomboka ny asabotsy teo no nakaty.